यौ न सम्पर्क गर्न नपाएर श्रीमती भागी भनेपछि श्रीमतीले खोलिन् वास्तविकता, ‘१० वर्ष देखि बे’डमै कुरीरहेकी छु’ (भिडियो हेर्नुस्) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/यौ न सम्पर्क गर्न नपाएर श्रीमती भागी भनेपछि श्रीमतीले खोलिन् वास्तविकता, ‘१० वर्ष देखि बे’डमै कुरीरहेकी छु’ (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । चन्द्रागिरी नगरपालिकामा अनौठो खबर सार्वजनिक भएको छ । एउटा महिला आफु माथि परेको अनौठो घटनाका बारेमा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् । रिता खड्काले आफ्नो अनौठो सम्बन्धका बारेमा खुलासा गर्दै सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनको २०६६ सालमा विवाह भएको थियो । तर उनीहरु करिब १० वर्ष देखि संगै छैनन् । उनी श्रीमानको घरमै छन् त्यस्तो विवाद पनि भएको छैन । तर उनीहरुबीच श्रीमान श्रीमतीबीच हुने सम्बन्ध नभएको १० वर्ष भइसकेको छ ।
आफुसंगै बसेकी बुहारीलाई सासु ससुराले शा रि रि क स म्ब न्ध राख्न नपाएका कारण बुहारी हिँडी भन्दै समाजमा हिँडेपछि उनी आफ्नो वास्तविकता सहित सार्वजनिक भएकी हुन् । छोरासंग सम्बन्ध विग्रिएको १० वर्ष सम्म पनि सासु ससुराको सेवा गरेर बस्दा आफुलाई यस्तो नरामे आरोप लगाएको भन्दै उनले चित्त दुखाएकी छन् । मलाई सासु ससुराले तिमीहरु सानो इज्जतको परिवार, हाम्रो घर धानेर बस्न सक्दिनस् भन्नुहुन्छ । मेरो बुवा आमाले विवाह गरेर दिएको घर यहि हो म कहाँ जाउँ ? उनले आँ शु झा र्दै भनिन् ।
सानो छोराको आफ्नै जिम्मेवारी लिएर हुर्काएकी उनी विद्यालयमा काम गर्छिन । उनी विहान ८ वजे स्कूल पुग्नुपर्ने र छोराको पनि सबै जिम्मेवारी निभाउने बताइन् । उनले श्रीमानले फोनमा राम्रो रेस्पोन्स नगर्ने गरेको बताउछिन् । यस अघि फोन गर्दा फोन नै नउठाउने श्रीमान अहिले भने फोन गर्दा उठाउने गरेपनि राम्रो ब्यवहार नगर्ने गरेको बताएकी छन् । उनले सासु ससुराले चाहेको भए आफ्नो घर राम्रो हुन सक्ने बताएकी छन् ।
उनले आफु कानुनका बारेमा केही थाहा नपाएका कारण कुनै प्रकृया नगरेको बताएकी छन् । आफ्ना बारेमा बोलिदिने र सहयोग गर्ने कोही नभएको कारण कानुनी रुपमा जान नसेकेको बताएकी छन् । उनले अहिले भने आफुलाई विरामी भएपनि पानी समेत खान दिने मान्छे नभएका कारण मिडियामा आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेको बताइन् । सासु ससुरा बसेकै घरमा छुट्टै बस्ने गरेकी उनले आफुलाई परिवारले हेला गरेका कारण बिचल्ली भएको बताएकी छन् ।
चिट का,ट्न छाडेर यी महिला ट्राफिक प्रहरीले बीच सडकमै उठ,बस गराइन्…[भिडियो सहित]
मनै रुवाने स्टाटस लेखेर धादिङ बाट बिदा भय अमृत सापकोटा !
संचारमन्त्रीले ७० करोड बार्गेनिङ्ग गरेको दावीसहितको अडियो सार्वजानिक (सुन्नुहोस् अडियो)
कोरोना नियन्त्रणमा खर्च देखाइयो ८ अर्ब, तर अर्थ मन्त्रालयबाट भने झण्डै ६ अर्ब मात्र निकासा (भिडियो)